Shiinaha Collagen Peptide warshad iyo alaab-qeybiyeyaal. Gelken
Koofiyadaha 'Collagen' waxa ku jira in ka badan 18 nooc oo ah amino acids, nafaqo leh, fududna in la nuugo, ayaa lagu dabaqay cabitaannada, keega, nacnaca iyo alaabada kale, ee ku jira cufnaanta cuntada iyo emulsification, waxayna kordhisaa dheefshiidka fudud iyo nuugista borotiinka ku jira cuntada, waxay leeyihiin saameyn diimeed, waxay dhiirrigelisaa bogsashada xuubka xabka ee jirka, hagaajinta wajiga dhiigga, sidoo kale waxay leedahay saameyn wax ku ool ah oo daaweyn ah oo loogu talagalay dhiigga oo dhan wuxuu yareeyaa dhiigbaxa.
Peptide Collagen, oo inta badan laga soosaaray kalluunka, lo'da iyo doofaarrada, ayaa leh culeys ka yar unugyada jirka ee loo yaqaan 'collagen' oo si dabiici ah looga helo jirka dadka iyo xoolaha, waxaana si toos ah u nuugi kara jirka aadanaha.
Maraqeena maalinlaha ah ee maraqa doofaarka lagu kariyo, maqaarka hilibka, cagaha digaaga iyo wixii la mid ah waxay ka kooban yihiin kolajiin hodan ah, laakiin ma ahan peptide-ka yaryar ee si toos ah u nuugi karna.
Intaa waxaa dheer, daraasadaha ayaa sidoo kale tilmaamay in xaddiga isku-dhafka kolajka ee peptides-ka nuugista uu ka sarreeyo kan amino acids-ka bilaashka ah.
Koofiyadaha 'Collagen', oo laga soosaaray kolajka dabiiciga ah, ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa walxo ceeriin ah oo shaqeynaya cuntada, cabitaanka iyo kaabayaasha cuntada ee loogu talagalay faa'iidooyinka lafaha iyo caafimaadka wadajirka ah iyo quruxda maqaarka.
Isla mar ahaantaana, peptides collagen sidoo kale waxay dedejin kartaa dib u soo kabashada tababarka dadka jecel cayaaraha ama cayaaraha xirfadleyda ah.
Daraasado cilmiyaysan ayaa muujiyay taas peptides collagen, markii loo qaato sidii nafaqeeynta cuntada, isla mar ahaantaana dardar gelin karta cusboonaysiinta unugyada iyo koritaanka jidhka bini'aadamka, iyo fikradda cilmiga bayoolaji ee ka dambeysa faa'iidooyinkaan caafimaad ayaa soo ifbaxaya.
Koofiyadaha 'Collagen' dhammaantood waxay ka kooban yihiin peptides gaagaaban, oo ka kooban inta u dhexeysa 2 iyo 20 amino acids.
Qaadashada kadib, qaar peptides collagen maray enzymolysis muhiim ah jirka. Enzymes-ka dheef-shiidka ayaa u kala jajabiya peptides-kan gaaban qaabab yar yar sida dipeptides iyo tripeptides, si markaa ay si fudud jidhku u nuugaan oo dhiigga loogu cabbiro.
Hore: Kolajka loogu talagalay cabitaanka adag
Xiga: Kalluunka kalluunka